बुटवलमा युवा निषेधित कोठा भाडामा ! - Butwal Online
बुटवलमा युवा निषेधित कोठा भाडामा !
बुटवलको अधिकांश भेगमा दिनहु कोठा भाडाको निम्ति आवतजावत गर्न को चाप दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। बिभिन्न रोजगार, अध्ययन एबम् बसाइसराइको रोजाइ बन्दै आएको बुटवलमा बढेको जनसंख्या को चाप सँग निर्माणाधीन भवन को सँख्यामा निकै बृदी भएको समेत पाउन सकिन्छ।
बुटवलको हरेक गल्ली गल्ली मा छिर्न हम्य पर्नेेगरि भवन हरु ठडिएका छन। प्रत्येक टोल मा एक वा त्यो भन्दा बढी कोठा खाली छन तर अधिकाँश घरबेटीले प्रायः युवा निषेधित कोठाको पहिचान गराइदिन्छन । सबैजसो घरमा सोधिएका प्रश्न र प्राप्त उत्तर मा यहि कुराको प्रतिबिम्ब गर्दछन कि युवा निषेधित कोठा भाडामा।
स्याङ्जा बाट बुटवलमा आफ्नो पढाईलाई निरन्तरता दिन गएका दिनेश न्यौपाने को भनाई यस्तो छ। पुरुषको तुलनामा महिला केही पक्षमा अब्बल होलान तर के ती युवाहरुमा त्यही अब्बलता हासिल गर्न प्रयास गर्न के एक मौका नदिनु बेस होला र ?
सरसफाइ देखि लिएर विभिन्न किसिमका कार्यमा महिला पुरुष भन्दा अब्बल छन के परेपछि युवाहरु पछि पर्लान र ? शिक्षित एबम् रोजगार ब्यक्ती ब्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा बातावरणिय सरसफाइ लाई भनिराख्नु नपर्ला सायद।
उनिहरु आफैमा ज्ञान लिने र दिने ज्योति प्रदायक हुन भने के उनिहरु अज्ञानता देखाएर मुर्खता पेश सायदै नगर्लान। आफ्नो शिक्षालाइ निरन्तरता दिदै बुटवलमा बसोबास गर्दै आई रहेका स्याङ्जाका अन्य युवा हरुको हालत उस्तै रहेको छ भने अन्यत्र बाट बुटवलमा आएका युवा हरुको हालत झन कस्तो होला उनले थप्दै भने ।
प्राय अविवाहित युवा हरु यस्ता “युवा निषेधित कोठा भाडामा“को मारमा परेको पाइन्छ जो प्राय बिद्यार्थी वा रोजगार हुन्छन । के देशमा दक्ष जनशक्ती उत्पादन हुँदै गर्दा एउटा भाडा तिरेर समेत कोठा पाउदैन भने साउदि कतार दुबई कोरियामा श्रम नबेचेर के गर्न होला र?
तीजका कार्यक्रमविरुद्ध प्रशासनले रोक लगाउनु हिन्दूधर्म-संस्कृतिमाथि प्रहार हो
नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा युवाको भुमिका
विषादी अबशेष, परिक्षण शैली, समस्या, निकाय, चुनौती विकल्प र फाइदाहरु
असारे बिकासको चटारो : ठेकेदारलाई भ्याइनभ्याई, अरबौँ बजेटको सत्यनास
मैले बुझ्न पाएको रानीघाट दरबार (रानीमहल)
सम्माननीय प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली ज्यूलाई चिठी